Jesu Anozviratidza Kune Vakawanda Amutswa | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Isoko Japanese Jula Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
RUKA 24:13-49 JOHANI 20:19-29
JESU ANOZVIRATIDZA KUVADZIDZI MUMUGWAGWA UNOENDA KUEMAUSI
ANOVHURIRA VADZIDZI VAKE MAGWARO KAKAWANDA
TOMASI ANOBVUMA KUTI JESU AMUTSWA
Musi weSvondo, Nisani 16, vadzidzi vakasuruvara. Havasi kunzwisisa kuti nei vawana muguva musisina munhu. (Mateu 28:9, 10; Ruka 24:11) Zuva rorereka, Kreopasi nemumwe mudzidzi vanobuda muJerusarema vakananga kuEmausi, iyo iri kure nemakiromita 11.
Vari kufamba vachikurukura nezvezvakaitika. Mumwe munhu wavasingazivi anobva abatana navo parwendo rwavo. Anovabvunza kuti: “Inyaya dzipi idzi dzamuri kukurukurirana muchifamba?” Kreopasi anopindura kuti: “Ndiwe woga uri kugara muJerusarema somutorwa zvokuti hauzivi zvinhu zvakaitika mariri mazuva ano here?” Munhu wacho anovabvunza kuti: “Zvinhu zvipi?”—Ruka 24:17-19.
Vanoti: “Zvinhu zvine chokuita naJesu wokuNazareta. . . . Taitarisira kuti munhu uyu ndiye aifanira kununura Israeri.”—Ruka 24:19-21.
Kreopasi nemumwe wake vanotanga kurondedzera zvaitika musi iwoyo chaiwo. Vanoti vamwe vakadzi vaenda kuguva rakanga ravigwa Jesu vawana musina munhu uye kuti vaona ngirozi dzavaudza kuti Jesu mupenyu. Vanotaura kuti vamwe vaendawo kuguva racho “vawana zvakaita saizvozvo, sezvanga zvataurwa nevakadzi vacho.”—Ruka 24:24.
Zviri pachena kuti vadzidzi vaviri ava vari kutenderedzwa musoro nezvaitika. Murume wavari kufamba naye anotaura zvine chiremera achigadzirisa kusanzwisisa kwavari kuita uko kuri kuita kuti mwoyo yavo inetseke achiti: “Haiwa imi mapenzi uye vane mwoyo inononoka kutenda zvinhu zvose zvakataurwa nevaprofita! Zvakanga zvisina kukodzera here kuti Kristu atambure zvinhu izvi uye kuti apinde mukubwinya kwake?” (Ruka 24:25, 26) Anobva atanga kuvatsanangurira ndima dzomuMagwaro dzinotaura nezvaKristu.
Varume vatatu ava vanozosvika pedyo neEmausi. Vadzidzi ava vaviri vari kuda kunzwa zvimwe, saka vanoti kumurume uya: “Garai nesu, nokuti kwatosviba hwatova usiku.” Anobvuma, ogara navo pasi kuti vadye. Paanonyengetera, omedura chingwa, ovatambidza, vanobva vamuziva, asi anobva angonyangarika. (Ruka 24:29-31) Vanobva vaziva kuti zvechokwadi Jesu mupenyu!
Vadzidzi vaya vaviri vanotaura nomufaro nezvezvaitika kwavari vachiti: “Mwoyo yedu yanga isingatsvi here zvaanga achitaura nesu mumugwagwa, zvaanga achitivhurira kwazvo Magwaro?” (Ruka 24:32) Vanobva vadzokera kuJerusarema nokukurumidza, vosvikowana vaapostora nevamwe vari pamwe chete. Kreopasi nemumwe wake vasati vambotaura zvavaona, vanonzwa vamwe vachiti: “Chokwadi Ishe amutswa uye azviratidza kuna Simoni!” (Ruka 24:34) Vaviri ava vanobva vataura kuti Jesu azviratidza sei kwavari. Naivowo vamuona nemaziso avo.
Vachitaura kudaro, vanovhunduka pavanongoerekana vaona Jesu amira pakati pavo! Izvi zvinoshamisa nekuti vanga vakazvikiyira vachitya vaJudha. Kunyange zvakadaro, Jesu akamira pakati pavo chaipo. Anotaura zvinyoronyoro kuti: “Rugare ngaruve nemi.” Asi vari kutya. Sezvakamboitika, vari ‘kufunga kuti vari kuona dzangaradzimu.’—Ruka 24:36, 37; Mateu 14:25-27.
Kuti avaratidze kuti haasi dzangaradzimu kana kuti chimwe chinhu chokufungidzira, Jesu anovaratidza maoko ake netsoka kuti vaone kuti ane muviri wenyama achiti: “Munonetsekerei, uye nei mwoyo yenyu isina chokwadi nazvo? Onai maoko angu netsoka dzangu, ndini chaiye; ndibatei muone, nokuti mudzimu hauna nyama nemapfupa sezvamunoona zvandiinazvo.” (Ruka 24:36-39) Vanofara zvokufara zviya uye vanoshamiswa asi kunyange zvakadaro, vachiri kuti omerwei nokubvuma zvavari kuona.
Kuti vanyatsobvuma kuti ndiye chaiye, Jesu anovakumbira kuti: “Mune chimwe chinhu chokudya pano here?” Anotambidzwa hove yakagochwa otanga kudya. Anozoti: “Aya ndiwo mashoko angu andakakutaurirai pandakanga ndichiri nemi [ndisati ndafa], kuti zvinhu zvose zvakanyorwa mumutemo waMosesi neZvakanyorwa nevaprofita nomuMapisarema pamusoro pangu zvinofanira kuzadzika.”—Ruka 24:41-44.
Jesu abatsira Kreopasi nemumwe wake kunzwisisa Magwaro, uye ndizvo zvaava kuita kwavari vose vakaungana imomo achiti: “Zvakanyorwa kuti Kristu aizotambura omuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu, uye rupfidzo rwokukanganwirwa zvivi rwaizoparidzwa muzita rake kumarudzi ose—kutangira muJerusarema, imi munofanira kuva zvapupu zvezvinhu izvi.”—Ruka 24:46-48.
Musi uyu zvangoitikawo kuti muapostora Tomasi haapo. Mazuva anozotevera, vamwe vanomuudza nomufaro kuti: “Taona Ishe!” Tomasi anoti: “Kana ndikasaona pakaboorwa nezvipikiri mumaoko ake, ndopinza munwe wangu pakaboorwa nezvipikiri, ndopinza ruoko rwangu murutivi rwake, chokwadi handingatendi.”—Johani 20:25.
Pashure pemazuva masere, vadzidzi vanounganazve vakazvikiyira, asi nhasi Tomasi aripo. Jesu anomira pakati pavo aine muviri wenyama ovakwazisa achiti: “Rugare ngaruve nemi.” Anotendeukira kuna Tomasi oti: “Isa munwe wako apa, uone maoko angu, uye pinza ruoko rwako murutivi rwangu, urege kuva asingatendi asi utende.” Tomasi anobva ati: “Ishe wangu naMwari wangu!” (Johani 20:26-28) Iye zvino haasisina kana nemubvunzo kuti Jesu amutswa uye kuti afanana naJehovha Mwari uyo waari kumiririra.
Jesu anoti: “Watenda here nokuti wandiona? Vanofara vasingaoni asi vachitenda.”—Johani 20:29.
Mumwe murume anobvunza vadzidzi vaviri vari kuenda kuEmausi nezvei?
Nei mwoyo yevadzidzi ichitsva?
Kreopasi nemumwe wake pavanodzoka kuJerusarema, vanosvika vachinzwa nezvei, uye chii chinobva chaitika?
Tomasi anozosvika sei pakuva nechokwadi chekuti Jesu mupenyu?
Sezvo kumutswa kwaJesu iri dzidziso inokosha chaizvo muBhaibheri, tinoda kuziva kana kwakanyatsoitika.